Ruva uye butterfly maTatoo: mazano, zvinoreva uye nezvimwe! | Kunyora
Ruva uye butterfly nyora
Susana godoy | | MaTatoo eMaruva uye Zvirimwa, Mhando dzematatoo
Zvisikwa idingindira rakajairika mumatato uye imwe nzira yekutora runako rwayo kutora tattoo yemaruva uye mapururu. Zvese zviri zviviri zvinhu zvinogona kureva zvinhu zvakasiyana kwazvo asi pasina kupokana, zvinogona kuve mucherechedzo muhupenyu hwako kana ukafunga kuzvibata pamwechete mutatoo. Butterflies chinhu chakanaka uye chakakurumbira mumatato evakadzi nevamwe varume.
Ichi chisikwa chinopepereka pamusoro pemaruva chinotiyeuchidza kuti isu tese takabva pakuva makonye akapusa kusvika pakuva mapururufuru chaiwo anokwanisa kubhururuka pachawo. Ruva uye butterfly maTatoo anogona kuve anoshamisa akanaka kune vese varume nevakadzi. Vanhu vazhinji vanosarudza kuwana izvi zvigadzirwa mutema nemuchena, asi ini ndinokuraira kuti uzviite zvizere ruvara.
Maruva anogona kureva chinhu kana chimwe zvichienderana nerudzi ruva raunosarudza uye zvarinoreva kwauri. Maruva anogona kufananidzira hupenyu, hunhu, tariro yekuona zuva mushure medutu, rudo, runako ... uye pamwe chete nebhatafurayi zvinogona kuratidza mufaro wekurarama, kuzvarwa patsva mushure menguva yakaipa, kuti vanhu vese vanogona kuzvarwa patsva kana isu tichinyatso kurwira kuzviita uye nekuzvishandura isu pachedu.
Bhatafurayi rinomiririrawo rudo, rugare, kubhururuka uye Iko kushandurwa. Ngatiyeukei kuti shavishavi rinotanga semhashu uye rinochinja nekufamba kwenguva richiva shavishavi rinoyevedza. Shanduko iyi inomiririra vakadzi vazhinji nevarume vazhinji vakashanduka uye vakadzidza kuzvarwa patsva nekutanga bhengi ravo.
1 Mavara emaroses uye mapuruguru
2 Butterfly uye creeper nyora
3 Ndekupi kwekutora maruva uye butterfly tattoo
Mavara emaroses uye mapuruguru
Kunyangwe maputuru ari anomiririra irwo rudo kana shanduko uye shanduko, zvimwe zvirevo zvinofanirwawo kuwedzerwa zvinoenderana nerudzi rworuva rwunofamba narwo. Izvo hazvina kuomarara zvachose, nekuti imwe yeanonyanya kudiwa kupedzisa dhizaini, ndiwo maruva. Izvo zvakasikwa zvakasikwa zvinouya pamwechete uye ndizvozvo nyora dzemaruva uye mapururu Ndidzo dzakanakisa dzatinogona kuwana. Asi chii chavanogona kufananidzira? Zvakanaka, kutaura zvakafara, maruva akafanana nerudo uye runako.
Kana isu takatarisana neruva jena, zvino rine zvarinoreva zvakachena zvatingafungidzira. Ndichiri maroses akafanana neshungu, zvakasviba zvavari, ndipo pavachave nechiratidzo chekufarira. Ehezve, kana iwe ukasarudza yero maruva, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unenge uchinongedzera kune hushamwari kana hushamwari mune zvese. Roses mumatoni epingi zvakare anowanzo dudzirwa seyakanaka uye inotapira nguva yawakave nayo muhupenyu. Kunyange zvichinzi maruva ebhuruu akafanana nezvishuwo. Kunze kwekukosha kwerimwe nerimwe ramavara, rangarira kuti iruva rinoyemurwa nevaGreek Gods uye nengano dzehafu yepasi.
Butterfly uye creeper nyora
Chokwadi ndechekuti dhizaini yekubatana neiyo butterflies uye mizambiringa ndiyo yakakwana kwazvo. Hongu, ichokwadi kuti inogona kunge iri pfungwa yekuzvininipisa, asi zvirokwazvo isu tinongoda kuzvitarisa mune mamwe magadzirirwo uye muchimiro chemifananidzo. Sezvo iri tatoo inovhara yakawanda nzvimbo yeganda asi ihwo hwakaenzana hweicho chakanyanya kukosha. Iwe unogona kusanganisa mavara uye zvakare sarudza dzakasiyana zvikamu zvemuviri kuti uzviratidze. Nekuti kwete chete maoko kana makumbo anogona kunge akanaka canvas. Iwe unofungei nezve musana nemutsipa? Iyi imwe sarudzo huru yekupa ruvara uye runako kuganda redu nematato emaruva uye mapuruguru.
Ndekupi kwekutora maruva uye butterfly tattoo
Nzvimbo yekumashure igirafu rakakura. Asi zvinogara zvichitsamira pane kuravira kweumwe neumwe. Semutemo wakajairwa, mumwe anowanzo sarudza iyo creeper dhizaini iyo iri kukwira yakananga kuchikamu chemutsipa. Kana, gara uine zano rinongotora nzvimbo iyoyo chete. Nesanganiswa yemaputuru mumavara uye maruva akasiyana siyana senge maruva kana Cherry ruva, ayo asiri kumashure kumashure mukunaka.
Zvekare tinotaura nezve gumbo, ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kudiwa. Iyo tattoo inowanzo kuoneka muchikamu chepamusoro chayo uye yatove padyo nehudyu. Mune ino kesi, iyo sarudzo yemavara haisi kumashure kumashure zvakare. Ichokwadi kuti iwe une sarudzo yemagadzirirwo e creeper kana kunamatira neaya anoita kunge bouki uye mapururu anopururudza. Nzvimbo yechidya ndiyo inonyanya kukumbirwa, hausi iwo zano rakanaka?
Imwe yenhengo dzepabonde dzomuviri dzatinogona kupfeka netatoo yakanaka. Miti yemizambiringa inosanganisa iwo mavara egirini nemaruva akaomesesa, zvakare anoonekwa mune ino chikamu chemuviri. Pamusoro pechiuno pachayo, ivo vanouyawo padhuze neiyo dumbu nenzvimbo yeguvhu. Kusiya magadzirirwo akasarudzika uko, pamusoro pezvose, ruvara ndicho chinhu chikuru.
Chipfuva nebendekete zvinotsigirawo maruva uye butterfly tattoo dhizaini. Ichokwadi kuti mune ino kesi, pamwe kune vanhu vazhinji vanosarudza kuwedzera saizi yemapururu uye nekuvapa mukurumbira. Asi ichokwadi kuti tinogona kuwana zvido zvemunhu wese. Hibiscus maruva kana orchids Ivo vanouyawo kubva paruoko rwemaruva kuti vafarire tattoo yakadaro.
La lateral uye yekumberi nzvimbo yetsoka inobvuma muzambiringa wakareruka wemaruva madiki uye mapururu, akaenzana saizi. Ichokwadi kuti pano tinofanirwa kungwarira zvakanyanya maererano nehukuru asi kwete maererano nemavara. Saka isu tinogona zvakare kuratidza edu akanakidzwa ekuda. Mapoppies nemaruva anogona kunge aripo. Ivo anowanzo gara akafanana nehukama, nekuti inzvimbo inoyemurwa nevazhinji uye vazhinji. Iva zvazvingaita, zvirokwazvo uchasarudza dhizaini inonyatsokodzera iwe.
Ruzhinji runosimbisa kurwadziwa kunonzwika mune izvi nzvimbo yemakumbo patinotora tattoo. Asi zvinogara zvichitsamira padanho rekurwadziwa iro rimwe nerimwe raanaro. Naizvozvo, zvinogara zvirinani kusarudza diki rinosanganisa maruva uye mapururufuru akanaka. Edza kuipenda uye iwe uchaona iyo yakanaka mhedzisiro. Iwe unayo chero chinhu mupfungwa?
Kana iwe uchida maruva uye mapuruguru uye iwe uchifunga kuti inogona kuva nerevo huru kwauri uye kune hwako hupenyu, usazeze kufunga nezve butterfly tattoo dhizaini nemaruva uye unakirwe nayo mazuva ese aunotarisa pairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Ruva uye butterfly nyora
Typography yetattoos, mienzaniso mitatu yekufemerwa